म उपाध्यक्षको आंकाक्षी हुनु स्वभाविक हो – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, २२ पुष २०७६, मंगलवार १६:१९
रमेशप्रसाद पोखरेल संचालक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाल
नेपालका सहकारी अभियानका चिर परिचित ब्याक्ति जसलाई देख्ने बित्तिकै सबैले सहकारी भन्ने सम्झन्छन् । यस्ता ब्यक्ति हुन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बर्तमान सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. का निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल । मोरङ्गको विराटनगरमा जन्मेका पोखरेल विगत लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय छन् । वि.सं. २०५२ सालदेखि सहकारीमा संलग्न उनीसंग सहकारीका बिभिन्न संघ संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभव छ ।
नेपाल सरकारका सहकारी सम्वन्धि बिभिन्न समिति र आयोगहरुमा समेत रहेर उनले कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय सहकारी बैकको २ कार्यककाल अध्यक्ष रहिसकेका पोखरेलले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको संचालकको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका छन् । राजनितिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उर्तिण पोखरेल त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तरगतको महेन्द्र मोरङ्ग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा १७ बर्ष प्राध्यापन समेत गरेका छन् ।
यहि पौष २४ र २५ गते सम्पन्न हुन लागेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदको चर्चामा रहेका रमेशप्रसाद पोखरेलसंग समसामयीक बिषयमा गरेको कुराकानी
तपाई उपाध्यक्षको आकांक्षी हुनुको मुख्य कारण के हो ?
– म विगत २४ बर्ष देखि सहकारी क्षेत्रमा संलग्न छु । मैले सहकारीका बिभिन्न नेतृत्वदायी भूमीकाहरु निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पनि म विगत २ कार्यकाल देखि संचालकको रुपमा कार्यरत छु । यस कारण पनि स्वभाविक रुपले मेरो उपाध्यक्षमा आकांक्षा भएको हो । सहकारीका वर्तमान उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै यस क्षेत्रलाई ब्यवसायिकीकरण गरेर मुलुकको समग्र विकासका लागि मेरो यस क्षेत्रमा आवश्यक्ता छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । साथीहरुको पनि यहि चाहाना रहेको मैले बुझेको छु ।
समस्याको तगारोका रुपमा रहको निति, नियमका सम्वन्धमा के भन्नु हुन्छ ?
– नेपालको संबिधानमा ३ खम्बे अर्थनिति भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसैका आधारमा सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनमा अझै समय सापेक्ष केही दफा संसोधन र थप गर्ने प्रकृयाको सुरुवात भएको छ । यसका साथै करिब ५० वटा अन्य ऐनहरु सहकारी ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा बाधक बनेका छन् । ती बाधक समस्यालाई नेपाल ऐन संसोधनको प्रकृयावाट समाधान गर्ने कार्यको थालनि भईसकेको छ । हामी यो कामलाई प्राथमिक्ताका साथ अगाडी बढाउछौं र सहकारीका नितिगत केही समस्याहरु तत्कालै समाधान गर्नेछन् । केही समस्याहरुलाई ऐन संशोधन मार्फत समाधान गरिने छ, त्यसमा पनि कार्य प्रारम्भ भईसकेको छ ।
महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत हुने देखिदैन भन्छन नि के यो सत्य हो ?
– महासंघमा जान र सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्न सबैलाई ईच्छा हुनु स्वभाविक हो । यसलाई अन्यथा ठान्नु हुदैन तर जा सम्म वर्तमान निर्वाचनको कुरा छ , हामी सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौं । मलाई विश्वास छ यसपटकको नेतृत्व चयन सर्वसम्मत रुपमा हुनेछ । महासंघका वर्तमान अध्यक्ष ज्यू लगायत सबै नेतृत्व वर्ग सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका पक्षमा लागि रहनु भएको छ । यदि सर्वसम्मत हुन नसके प्रजातान्त्रिक प्रकृया अगााडी बढ्न सक्छ यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुदैन । तर ब्याक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म सर्वसम्मत नेतृत्व हुन सकोस भन्ने चाहना राख्दछु ।